Iglasi ebunjiweyo yeGlasi yeoyile ebaluleke ngokobunzima kunye neHumidifier China Manufacturer
Inkcazo:Isithambisi seoyile yeArhente,Isithambisi kunye neNgcaciso yeoyile efunekayo,Isithambisi sobunzima kunye neHumidifier
Home > Imveliso > Ihotele Humidifier > Iglasi ebunjiweyo yeGlasi yeoyile ebaluleke ngokobunzima kunye neHumidifier
Umzekelo No.: DT-1503M
Guqula naliphi na igumbi libe yindawo ethambisayo ne-100 ml yeUltrasonic Humidifier kunye nokuKhanya ebusuku ngoDituo. Le phunga lahlukileyo litanki lamanzi lenziwa ngezinto zePP, likwenza ukuba kukhuseleke usapho lonke ukuba lisebenzise. Isishushubezi sasekhaya sisebenzisa itekhnoloji ye-ultrasonic ukudala indawo ezolileyo, ekhuselekileyo nenempazamo kunye nearomatherapy. Kukho useto lwexesha lesithuba kunye nesethingi eqhubekayo yokubaleka ukuba nenkungu epholileyo ixesha olifunayo; Isiqholo esisekhayeni sisebenza ngokukhuselekileyo kunokukhuseleka kwamakhandlela xa ulele ngokuthambisa ivumba. Isikhuseli seglasi sinokucimeka ngokuzenzekelayo ukucwangcisa okufumana xa itanki lamanzi eli-100 ml lingenanto ukugcina iyunithi kunye nokugcina amandla. Isithambisi ioyile yasekhaya inokuqhuba iiyure ezingama-5 ngokuqhubekayo. Isiseko sanamhlanje, somthi wokudla okuziinkozo kunye nesakhelo seglasi esimenyezelayo sesi sithuthi siqinisekile ukuncoma phantse nayiphi na indlu yokuhombisa.
Umthamo weetanki: 100 ml
Umbala: iglasi yendalo
Izixhobo: Iglasi ye-PP ABS
Kubandakanya into yokukhanyisa kunye noseto olukhanyayo kunye nolusu
Umthamo omkhulu we-Ultrasonic Humidifier Mist epholileyo Qhagamshelana Ngoku
Uyilo oluYile lweentyatyambo eziPholileyo Mist yeUtridi yoMoya yokuphefumla Qhagamshelana Ngoku
Ukuhonjiswa kweMigangatho ePhambili yoPhuculo lweMoya oMdaka Qhagamshelana Ngoku
Iplagi Mini yombane kwi-Scent Fragrance Diffusers Qhagamshelana Ngoku
Gijimani iiyure ezingama-5 ezinkulu iiMoyile eziHlaziyiweyo zeeoyile Qhagamshelana Ngoku
I-Walmart ikhanyise ukuKhanya kweNzonzobila yaManzi aMdaka kunye neHumidifier Qhagamshelana Ngoku
Isithambisi seoyile yeArhente Isithambisi kunye neNgcaciso yeoyile efunekayo Isithambisi sobunzima kunye neHumidifier Isithambisi seoyile yeArhente yamayeza Isithambisi seoyile yeemoto Isithambisi seoyile ye-Smart Isithambisi seoyile yemoto Isithambisi seoyile yeWalmart